Trumpet နေ့ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > တံပိုး
စက်တင်ဘာလတွင်ဂျူးလူမျိုးများသည်နှစ်သစ်ကူးနေ့“ Rosh Hashanah” ကိုဟီဘရူးဘာသာဖြင့်ကျင်းပကြသည်။ ဂျူးတို့၏ရိုးရာအစဉ်အလာအရ၎င်းတို့သည်တစ်နှစ်တာ၏အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သောငါးခေါင်း၏တစ်ဖဲ့ကိုတစ်တွဲ စား၍“ Leschana towa” ဖြင့်တစ်နှစ်တာစားသည်။ မင်္ဂလာပါဟုဆိုလိုသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ၊ Rosh Hashanah ၏ပွဲနေ့နှင့်လူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသည့်ခြောက်ရက်မြောက်ဖန်ဆင်းခြင်းရက်သတ္တပတ်၏ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ဟေ​ဗြဲ​ကျမ်း​စာ​၌​လည်း​ကောင်း၊ 3. မောရှေကျမ်း ၂3,24 ထိုနေ့ကို "Sikron Terua" ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ " Trumpet Blowing with Remembrance Day" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပွဲကို ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် "Trumpet Day" ဟုခေါ်သည်။
ရဗ္ဗိများစွာက Rosh Hashanah တွင်မေရှိယကြွလာမည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ကိုကြိမ်ဖန်များစွာအကြိမ် ၃၀ အပါအ ၀ င်အနည်းဆုံးအကြိမ် ၁၀၀ လွင့်ပစ်သင့်ကြောင်းသွန်သင်ကြသည်။ ဂျူးသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရယနေ့ခေတ်မှုတ်သံ ၃ မျိုးရှိသည်။
Teki'a - ဘုရားသခင်သည် (ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်) ဟူသောမျှော်လင့်ချက်နှင့် တန်ခိုးတော်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရှည်လျားသောလေသံ။
Shevarim - အပြစ်နှင့် ၀ မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အပြစ်များအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြသည့်တိုတောင်းသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတန်ချိန်သုံးခု။
Teru'a - လျင်မြန်သော၊ staccato နှင့်တူသောမှတ်စုကိုးခု (နှိုးစက်နာရီသံနှင့်ဆင်တူသည်) ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ရောက်ကြသူများ၏ကျိုးပဲ့သောနှလုံးသားများကိုပြသရန်။
ရှေးအစ္စရေးတို့သည် တံပိုးမှုတ်ရန်အတွက် မူလက သိုးချိုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့် အချိန်အတော်ကြာတော့ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ ထွက်လာသလိုပါပဲ။ 4. အတွေ့အကြုံရှိသောမောရှေ ၁၀၊ ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတံပိုး (တံပိုး) ဖြင့်အစားထိုးသည်။ တံပိုးအသုံးပြုခြင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ၇၂ ကြိမ်ဖော်ပြထားသည်။
တံပိုးမှုတ်သံကိုကြားရသောအခါအန္တရာယ်များကိုသတိပေးရန်၊ လူအများအတူတကွပွဲတော်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပရန်၊ ကြေငြာချက်များကြေညာရန်နှင့်ဝတ်ပြုရန်ခေါ်ဆိုရန်ဖြစ်သည်။ စစ်ကာလတွင်တံပိုးများကိုစစ်သားများကိုသူတို့၏မစ်ရှင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်စစ်တိုက်ရန်အချက်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘုရင်၏ရောက်ရှိခြင်းကိုလည်းတံပိုးဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်။
ယေရှုသည် သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းစွာအနက်ပြန်ဆိုနိုင်သော မှန်ဘီလူးဖြစ်သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (ပဋိညာဉ်ဟောင်း ပါ၀င်သည်) ကို ဓမ္မသစ် (ယေရှုခရစ် အပြည့်အဝ ပြည့်စုံစေသော ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်) အားဖြင့် ယခု နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်တိုင်းမကျပါက၊ ပဋိညာဉ်တရားသစ်သည် ယေရှုပြန်မလာမချင်း မှားယွင်းသော ကောက်ချက်ချမှုများသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤယူဆချက်သည် အခြေခံအမှားဖြစ်သည်။ အချို့က ကျွန်ုပ်တို့သည် ပဋိညာဉ်ဟောင်းနှင့် ပဋိညာဉ်တရားသစ်များကြား အကူးအပြောင်းကာလတွင် ရှိနေသည်ဟု အချို့က ယုံကြည်ကြပြီး ထို့ကြောင့် ဟေဗြဲပွဲနေ့များကို ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်။
ပဋိညာဉ်ဟောင်းသည် ယာယီသာဖြစ်ပြီး တံပိုးမှုတ်သည့်နေ့လည်း ပါဝင်သည်။ “ပဋိညာဉ်တရားသစ်၊ အသက်ကြီး၍ ကြီးရင့်သောအရာမူကား အဆုံးနီးပြီ” (ဟေဗြဲ 8,17) ကြွလာမည့်မေရှိယကို လူများထံကြေညာရန် သူအသုံးပြုခဲ့သည်။ Rosh Hashanah တွင် တံပိုးခရာမြည်ခြင်းသည် အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ်ပွဲတော်ပြက္ခဒိန်၏အစကို အချက်ပြရုံသာမက၊ "ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရင် ကြွလာတော်မူမည်" ဟု ဤပွဲတော်၏သတင်းစကားကို ကြေငြာသည်။
အစ္စရေး၏ပွဲတော်များသည် ရိတ်သိမ်းခြင်းများနှင့် အဓိကဆက်စပ်နေသည်။ ပထမ ကောက်နှံပွဲ မတိုင်မီ ချက်ခြင်းတွင်၊ အဦးသီးသော ပွဲတော်၊ ပသခါပွဲ နှင့် တဆေးမဲ့ မုန့်ပွဲ တို့ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ရက်ငါးဆယ်ကြာပြီးနောက် အစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် ဂျုံစပါးရိတ်သိမ်းပွဲ၊ "သီတင်းများပွဲတော်" (ပင်တေကုတ္တေပွဲ) နှင့် ဆောင်းဦးပေါက်ရာသီတွင် ကြီးစွာသောရိတ်သိမ်းပွဲဖြစ်သည့် "တဲတော်ပွဲ" ကို ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ ပွဲတော်များသည် နက်နဲသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်၊ တံပိုးမှုတ်တဲ့နေ့ရဲ့ အထူးခြားဆုံးအပိုင်းကတော့ ယေရှုကို ညွှန်ပြပုံနဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးကြွလာချိန်မှာ ယေရှုက အဲဒါတွေအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပုံပါပဲ။ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ အပြစ်ဖြေခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ဖြင့် တံပိုးမှုတ်သည့်နေ့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ဤ "ခရစ်တော်၏အသက်တာ၌ အဖြစ်အပျက်များ" အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလနှင့် သူ၏ပဋိညာဉ် (ပဋိညာဉ်ဟောင်း) ကို ပြည့်စုံစေရုံသာမကဘဲ အချိန်တိုင်းကို ထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် တစ်နှစ်တာ၏ဦးခေါင်း—အချိန်တိုင်း၏အရှင်၊ အထူးသဖြင့် အချိန်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “သူ (ယေရှု) သည် မမြင်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးအပေါ်တွင် သားဦးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အလုံးစုံတို့ကို သူနှင့် သူ့အတွက် ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် အရာအားလုံးထက်သာလွန်၍ အရာအားလုံးသည် သူ့အထဲ၌ရှိသည်။ အသင်းတော်တည်းဟူသော ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဦးခေါင်းဖြစ်တော်မူ၏။ သူသည် အစအဦးပင်၊ သေခြင်းမှထမြောက်သော သားဦးဖြစ်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ မြေကြီးပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်စေ ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့အဘို့ အပြစ်ဖြေခြင်းငှါ၎င်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ပေါ်မှာ အသွေးတော်အားဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် နှစ်သက်တော်မူသည်" (ကောလောသဲ၊ 1,15-20) ။
ယေရှုသည် ပထမအာဒံကျဆုံးသည့်နေရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ငါတို့၏ပသခါသိုးသငယ်၊ ငါတို့၏တဆေးမဲ့မုန့်နှင့် ငါတို့၏အပြစ်ဖြေခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးသော (တစ်ဦးတည်းသာ) ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပုသ်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားမှ အနားယူခြင်းကို ရရှိသည်။
သူသည်သင်၌တည်နေပြီးသင်၌လည်းသူ၌တည်ရှိသည်။ သင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အသစ်သောအသက်တာကိုရှင်သန်နေသောကြောင့်သင်တွေ့ကြုံသမျှသည်သန့်ရှင်းပါသည်။ ယေရှုသည်သင်၏ရွေးနုတ်ရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ဘုရင်နှင့်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ သူကတံပိုးမှုတ်တစ်ချိန်ကနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်!